Linux အသုံးပြုသည့်စက်များတွင် trojan ပါဝင်မှုနှုန်းမြှင့်တက်လာ [Global News]
Myanmar IT Resource Forum » NEWS ZONE » » ပြည်ပ IT နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများ » Linux အသုံးပြုသည့်စက်များတွင် trojan ပါဝင်မှုနှုန်းမြှင့်တက်လာ [Global News]
1 Linux အသုံးပြုသည့်စက်များတွင် trojan ပါဝင်မှုနှုန်းမြှင့်တက်လာ [Global News] on 27th June 2010, 2:06 pm
Unreal IRCD Forum ၏ဖော်ပြချက်များအရ Linux အသုံးပြုသည့်စက်များတွင်
trojan ပါဝင်သည့် Unreal 3.2.8.1.tar.gz
ဖိုင်တစ်မျိုးကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ ထို trojan သည်
အသုံးပြုသူများကို မည်သည့်လုပ်ငန်းမျိုးကိုမဆို လုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုထားပြီး၊
အတားအဆီးများကိုကျော်ကာ ၀င်ရောက်နိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ဖော်ပြချက်များအရ
အဆိုပါ trojan သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှစတင်၍ .tar.gz များတွင်
အစားထိုးဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်ထိ အရေအတွက်မည်မျှ
ကူးစက်ခံထားရသည်ကိုမသိရှိရသေးကြောင်း သိရသည်။ Linux system အများစုသည်
trojan ပါဝင်လေ့ရှိသော်လည်း စီး ပွားရေးလုပ်ငန်းများကို
ထိခိုက်မှုမရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။ Linux system သည်
လုံခြုံရေးကောင်းမွန်သည့် OS မဟုတ်သဖြင့် အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်
ကျင်သူများ၏ပြောကြားချက်အရ သိရှိရသည်။ IT administrator များအနေဖြင့်လည်း
ပို၍သတိဝီရိယရှိရမည့်အပြင် Linux သည်လည်း Windows ကဲ့သို့ပင်
ခြိမ်းခြောက်မှုများရှိကြောင်းကိုလည်း သိရမည် ဖြစ်ကြောင်းဆိုသည်။ Windows
ကဲ့သို့ပင် Linux ကိုလည်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများပြုလုပ်ကာ trojan
များ၏အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်ကြောင်းကို ကျွမ်းကျင်သူများကဆိုကြသည်။
Last edited by ထက်နိုင် on 28th June 2010, 8:02 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : adding tag)
2 Re: Linux အသုံးပြုသည့်စက်များတွင် trojan ပါဝင်မှုနှုန်းမြှင့်တက်လာ [Global News] on 28th June 2010, 10:52 am
It is very funny. They don't even understand whata"tar.gz" file is. It isastandard compressed file (like .zip or .rar).
That so called Unreal 3.2.8.1.tar.gz seemed to beagame. I don't know if it actually attacks or not. However, due to the shell nature of linux, it is harder to attack Linux than to do so to Windows. (Now windows7is also with shell-like features).
3 Re: Linux အသုံးပြုသည့်စက်များတွင် trojan ပါဝင်မှုနှုန်းမြှင့်တက်လာ [Global News] on 28th June 2010, 2:20 pm
Linux တောင် မယုံရတော့ဘူးဆိုတဲ့ သဘောလား ဟင်
4 Re: Linux အသုံးပြုသည့်စက်များတွင် trojan ပါဝင်မှုနှုန်းမြှင့်တက်လာ [Global News] on 28th June 2010, 3:56 pm
Like usual, they just try to translate, but never want to know what it really is. I'm not saying this to Ko ET, i m saying this to original writer / translator. It does not really make sense at all.
UnrealIRCD isaone popular opensource IRC server platform. What happened is someone replaced the original source tarball with trojan included tarball in some of the official mirrors . So people who downloaded and compile from those infected mirrors get trojan infected.
It's simple. Someone downloadatrojan and install it, everyone can imagine what will happen regardless of the OS . PC world news topic is 'Linux Trojan Raises Malware Concerns'. ဖတ်မိတာ တစ်ပတ်လောက်ရှိပြီ။ ဒါကို ဘာသာပြန်ထားတာထင်တယ်။ ဘယ်လို ဘာသာပြန်လိုက်လည်း မသိဘူး ။
5 Re: Linux အသုံးပြုသည့်စက်များတွင် trojan ပါဝင်မှုနှုန်းမြှင့်တက်လာ [Global News]